कारबाही होला त औद्योगिक विवरण पेश नगर्ने उद्योगपतिलाई ? – Medianp
कारबाही होला त औद्योगिक विवरण पेश नगर्ने उद्योगपतिलाई ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, असार ०५, २०७५१३:३१0
काठमाडौँ, ५ असार । उद्योग विभागले औद्योगिक विवरण पेश नगर्ने उद्योगपतिलाई कारवाही गर्ने भएको छ । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को प्रावधानअनुसार २०७३÷७४ को औद्योगिक विवरण अद्यावधिकका लागि सूचना प्रकाशित गरेकामा उक्त विवरण नपठाए कारवाही गर्ने भएको हो ।
विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले मुलुकभर रहेका ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योगको विवरण अद्यावधिकका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिए । ‘विभागमा दर्ता भएका उद्योग सञ्चालन भए÷नभएको हेर्न विवरण अद्यावधिक गर्न लागेका हौँ ।’ उनले भने ।
उद्योग विभागबाट हालरु १० करोडभन्दा कम विदेशी लगानीका साना उद्योग, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका मझौला उद्योग र रु २५ करोडभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग दर्ता हुँदै आएका छन् ।
यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा धनी १० हिरोइन